Umthombothi - Imithi - Mzantsi Afrika
Umthombothi [Spirostachys africana]
Unamagqabi avuthulukayo kwaye uphakathi ngobude, umqhele wayo unempawu ezirhabaxa namnyama. Indawo engathi inobisi ingenza umonakalo emzimbeni nase mehlweni. Isetyenziswa njenge oyile yokupheka emakhaya ngenxa yevumba layo. Oluhlobo luqhele izinga elithile lo-khuselelo lwangaphakathi ukuze lingaxhatshazwa ngabantu.
IKudu iyawukhangela kodwa abazingeli bayaqhaphela xa bewunxibisa umzimba wesilwanyana esixheliweyo sapha eTamboti. Iinkuni zawo zimnyama ziphinde zibe neemigca eyenza iimpawu ezintle. Iinkuni zawo ziqinile, zinamandla ziyaqhubeka, kwaye zinevumba elimnandi ngaphezu kwele-sandal wood.
Eluvumba limnandi lihlala ixesha elide emva kokuba iinkuni zisusiwe. Ifenishala yenziwa kuba iyakwazi ukugciba indlu ngevumba elimnandi ixesha elide.
Iintyatyambo zomthombothi zivela pha kweyo Msintsi kwaye zimila ingathi imbewu yayo iyawa pha kweyeNkanga xasele zikhulile. Xa ume ecaleni komthombothi emini pha kweyeNkanga xa ilanga litshisa ubhobhoyi, ungeva ingxolo eyahlukileyo futhi xa usondela kuyo uzobona imbewu echumileyo.
Qokelela yonke lembewu uyibeke epleyitini ilanga litshisa, enye imbewu izochuma nayo. Vula lombewu leyo uzobona iimbotyi ziphuma apho. Lo mdla womthi i-‘Emporia melanobasis’ nguwo odala imbewu xa sele uluhlaza.
Usetyenziselwa ekukroleni ukwenza ifenishala yodidi nokwenza izivatho. Ngenxa yokunqaba nokungasebenziswa kwawo, linenkuni ezinqabileyo kwaye zifunwa ukwenzela imibhalo okanye ifenishala yodidi olungaphezulu.
UMthombothi ufunyanwa pha eMzantsi Afrika nase Swaziland.
Ukufuduka akuwulungelanga lomthi kuba oko kungu monakalo wesigidi soMthombothi apho lizomoshosa ukutya okosiweyo. Okunetyhefu kuyakhula ngaphantsi komthi futhi isetyenziswa nje nge tyhefu yokuloba iinkuni.